Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Club Brugge – Gool FM
(Madrid) 09 Dis 2019. Zinedine Zidane ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee kaga qeyb galaya kulanka tartanka Champions League ay habeenka Arbacada la ciyaari doonaan naadiga Club Brugge.
Real Madrid ayaa isku diyaarineysa kulanka ay habeenka Arbacada ku booqan doonaan kooxda Club Brugge garoonka Jan Breydel Stadion, kaasoo ka tirsan kulamada 6-aad ee wareega group-yada tartanka Champions League.
Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu gudubtay wareega xiga 16-ka ee tartanka Champions League, iyagoo ka dambeeya Paris Saint-Germain oo kaalinta koowaad kaga soo baxday GROUP A oo ay tartanka kaga jiraan.
Zinedine Zidane ayaa liiskan ugu yeeray 19 oo u safraysa dalka Belgium si ay kaga qeyb galaan kulanka Club Brugge, waxaana liiskan lagu arkay inay dib ugu soo laabteen xiddigaha Gareth Bale iyo Nacho, kaddib markii ay ka soo kabteen dhaawacyo ay qabeen.
Sidoo kale waxaa liiskan laga saaray xiddigaha Sergio Ramos iyo Toni Kroos si ay u helaan nasiino kahor kulamada soo aadan ay horyaalka La Liga kula ciyaari doonaan kooxaha Valencia iyo Barcelona, Hazard, Vasquez, Asensio, James Rodriguez iyo Mariano Diaz ayaa dhamaantood liiskan ka maqan.
Haddaba halka hoose kaga boggo liiska xiddigaha kooxda Real Madrid uu ku dhawaaqay tababare Zinedine Zidane, kuwaasoo ka qeyb galaya kulanka habeenka Arbacada ee Club Brugge: